Vaovao - Maninona no misafidy milina fanosotra
Satria gorodona vita amin'ny marbra na seramika ny gorodon'ny toeram-pivarotana sy ny gara, ny karazana gorodona toy izany dia mitaky avo lenta ny fahadiovana, manoloana izany, izy ireo dia maneho ny sarin'ny toerana ampahibemaso. Noho izany, ny asa fanadiovana dia tsy maintsy atao am-pitandremana. Tsikelikely, ny fomba fanadiovana nentim-paharazana sasany dia tsy afaka mahafeno ny fepetra fanadiovana amin'ireo fotoana ireo intsony, ary ny fisian'ny sy ny fampiharana ny masinina fanosotra amin'ny gorodona dia nanolo tanteraka ny asa tanana amin'ny fanadiovana gorodona amin'ny indostria maro.
Amin'ny fomba fanadiovana nentim-paharazana, matetika dia misy ny toe-javatra izay tsy misy ny fanadiovana, toy ny zorony maty sasany na ny tasy sasany izay sarotra esorina. Raha miangona ny tasy amin'ny fotoana rehetra, dia ho mavo sy maizina ny tany aorian'ny fotoana maromaro, misy fiantraikany amin'ny hatsarana. Ankoatr'izay, ny velaran'ireto toeram-bahoaka ireto dia lehibe tokoa, raha te-hanao asa tsara ianao amin'ny fanadiovana ny tany, dia mila manangona mpiasa manadio maro ianao hanatanterahana izany, izay fandaniana lehibe amin'ny vidin'ny asa.
Ny fampiasana milina fanosotra amin'ny gorodona dia afaka mamaha tanteraka ireo olana voalaza etsy ambony. Ny fiasan'ny masinina no tena betsaka. Mila manampy detergent fotsiny ianao, izay tsy vitan'ny fanadiovana ny gorodona, fa manana tombony ihany koa amin'ny fampihenana ny hamafin'ny asan'ny mpiasa amin'ny fanadiovana, ny fanatsarana ny fahombiazan'ny asa fanadiovana ary ny fihenan'ny vidin'ny asa fanadiovana. Amin'izao fotoana izao, ny haitao misy ny milina fanadiovana dia mivoatra hatrany ihany koa, andao miandry ary hijery.
Miaraka amin'ny fampandrosoana ny siansa sy ny teknolojia, ny fomba madio sy haingana fanadiovana nomen'ny fitaovana antsika toy ny mpianatra ho an'ny moto sy ny borosy gorodona dia nanjary sarotra kokoa ny miala. Indrindra amin'ny vanim-potoana fiasan'ny milina manan-tsaina, ny fahombiazana sy ny fahafaham-po no zava-dehibe kokoa.
Toy ny fivarotana lehibe, toeram-pivarotana ary gara izay matetika andehanana sy misy antsika, indraindray dia hitantsika ny endrik'ireo fitaovana fanadiovana isan-karazany toy ny milina fanosotra amin'ny gorodona.
Granite miloko mavo sy harafesina miloko dia granite rehetra amin'ny firafitry ny lamela. Ho fanampin'ny fanamafisana ny rano granita kapila an'ny granite, noho ny loko fotsy dia misy toerana misy rano na loto, ary ny dian-drano dia tsy mora manjavona. Ankoatr'izay, noho io vato io dia miaraka amina vy mavitrika ao anaty vatolampy, ny tontolo mando dia hitarika harafesina. Eo amin'ny sehatry ny fampiharana vato sy ny fitaizana be antitra, manana traikefa be dia be izahay ary voangona, ary ireo traikefa ireo amin'ny vokatra sy haitao mifandraika amin'izany. Nandritra ny taona maro tamin'ny fampivoarana ny vokatra sy ny fanavaozana, ny System Maintenance Stone dia nanjary safidy azo itokisana indrindra amin'ny orinasa mifandraika amin'ny vato any Shina sy manerantany.
Fotoana fandefasana: Jun-24-2020